Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » California, New York ary Washington dia nanambara fa ahiana indrindra ny COVID-19
endri-tranonkala an-tsary coronavirus
California, Washington, ary New York any Etazonia dia nampiana tao amin'ny lisitry ny Robert Koch Institute an'ny faritra be risika indrindra noho ny fihanaky ny olona amin'ny Coronavirus. Mampitandrina ny Institiota fa hanao dia lavitra na hijanona amin'ireo faritra ireo.
Ny Robert Koch Institute (RKI) dia iray amin'ireo vatana manan-danja indrindra amin'ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka any Alemana. Amin'ny maha andrim-panjakana mitarika eo amin'ny sehatry ny biomedinika azy, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana sy ny ady amin'ny areti-mifindra ary koa amin'ny famakafakana ireo fironana fahasalamam-bahoaka maharitra amin'ny rafi-pahasalamana alemanina.
Ny fikarohana sy ny fisorohana ny aretina dia maneho ny iray amin'ny sehatry ny asa mahazatra an'ny RKI. Ohatra, ny mpahay siansa dia manao fikarohana momba ny fananana molekiola sy ny fomba fampitana ny vondron'ireo pathogens rehetra, ao anatin'izany ny bakteria sy virus ihany fa ny holatra, katsentsitra ary prion toa ny pathogen BSE. Ankoatr'izay, ny RKI dia mirakitra sy manadihady angon-drakitra momba ny fisian'ny aretina mikraoba maro manerana an'i Alemana mifanaraka amin'ny hetsika fiarovana ny aretina.
Teo aloha dia notondroin'ity andrim-panjakana ity i Italia, Iran, ny Provincia Hubei any Sina, ny Provincia Gyeongsangbuk-do any Korea atsimo, ny Faritra Grand Est any Frantsa, ny Tyrol any Austria, i Madrid any Espana ary ny County of Heinsberg ao amin'ny fanjakana Alemanina ao amin'ny North-Rhine Westphalia. faritra be risika.